धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न पाँच कम्पनीका सेयर सूचीकृत भएका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार एनसीसी बैंकको ७९ लाख ११ हजार २८१ कित्ता हकप्रद सेयर सूचीकृत भएका छन् । यस्तै जानकी फाइनान्स लिमिटेडको ८ लाख ८७ हजार ४६६ कित्ता सेयर लाभांश, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २० लाख कित्ता सेयर लाभांश सूचीकृत भएको छ ।
स्टकका अनुसार बेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको ७ लाख ४७ हजार ५६१ कित्ता सेयर लाभांश र मुक्तिनाथ विकास बैंकको ४७ लाख २९ हजार ९६८ कित्ता सेयर लाभांश सूचीकृत भएको छ । साताभर सेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक १४.६५ बिन्दुले घटेको छ ।
यस्तै यस साता एभरेष्ट बैंकको संस्थापक सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । सो बैंकको १ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार भयो । यस्तै दोस्रोमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीको रु. ६२ लाख बराबरको कारोवार भएको छ । यस्तै प्रभु बैंक, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक लिमिटेको संस्थापक सेयर, नेपाल बैंक लिमिटेड र माछापुच्छ्रे बैंकको सेयर बढी कारोबार भयो ।
बजार पुँजीकरणमा भने नेपाल टेलिकम नै अग्रस्थानमा छ । सो संस्थाको रु. १ खर्ब ४ अर्ब २५ करोड बराबरको बजार पुँजीकरण रहेको छ । यस्तै नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र एनएमबी बैंक छन् ।